Ogaden News Agency (ONA) – Kalfadhigii Baarlamaanka Wayaanaha oo Qabsoomi Waayay, Sababta.
Kalfadhigii Baarlamaanka Wayaanaha oo Qabsoomi Waayay, Sababta.
Posted by Dulmane	/ November 26, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in uu qabsoomi waayay fadhigii baarlamaanka wayaanaha oo lagu waday in uu qabsoomo maalin nimadii shalay oo Sabti ahayd.
Sida xogta aan kuhelayno fadhigii baarlamaanka gumaysiga Itoobiya ayaa baaqday iyadoo sabab looga dhigay kooram la’aan, waxaana lasheegayaa in ay xarunta baarlamaanka iska sooxaadirisay tiro yar oo kamid ah baarlamaanka wayaanaha.
Sharciga udagan wadanka gumaysiga ayaa qaba in uu fadhiga baarlamaanku furmi karo oo kaliya kadib markay sooxaadiraan kalabadh hal dheeri 1/2 + 1 oo micnaheedu yahay in ay sooxaadiraan 275 xubnood oo kamid ah 547 da xubnood ee baarlamaan kusheegu uu kakooban yahay.
Xog rasmi ah oo ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa sheegaysa in lixdii fadhi ee ugu dambeeyay ee baarlamaanka wayaanuhu uu yeeshay ay kasoo qayb galayeen dad kayar 300 oo xubnood waxaana lasheegayaa in fadhiyada qaar ay ku sigteen in ay qabsoomi waayaan kooram la’aan.
Siyaasiyiin aad ula socda xaalada wadanka gumaysiga ayaa sheegaya in aan taariikhda lagu arag 26dii sano ee wayaanuhu ay talada hayeen kalfadhiga baarlamaanka oo kooram la’aan ubuuxsami waayay, waxaana sida lasheegay ay baarlamaanku ahaayeen kuwo lagu adeegto oo guriga baarlamaanka iska dhex jooga.
Xeeldheerayaal dhinaca siyaasada ah ayaa sheegaya in arintan ay muujinayso burburka hay’adaha kala duwan ee wayaanaha, waxayna xeeldheerayaashu sheegayaan in ay baarlamaanku kubiireen kacdoon wadayaasha taas oo keentay in ay fadhiyadii caadiga ahaa soo xaadiri waayaan.
Afhayeenka Baarlamaanka Wayaanaha Shitaye Minale oo saxaafada lahadashay ayaa kucalaacashay in ay xubnaha baarlamaanku soo ajiibi waayeen codsi ay udireen, haweenaydan oo ah kuxigeenkii ninkii iscasilay ayaa laga cabsi qabaa in ay is casili doonto.